परीक्षण मात्र समाधान होइन
जनस्वास्थ्यविद् डा. समीरमणि दीक्षित पनि जोखिम समूहको पहिचान गरेर परीक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। ‘क्वारेन्टाइनमा रहेका र संक्रमित बसेका स्थानमा बसोबास गरिरहेकाहरू नै जोखिम समूहमा पर्छन्’, डा. दीक्षितले भने। डा. वन्तका अनुसार, क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यसपछि कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा यात्रा गरेका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। वडा तहमा १० प्रतिशतलाई परीक्षण
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. सागरकुमार राजभण्डारी सरकारलाई मात्र दोष दिएर कोरोना नियन्त्रण नहुने बताउँछन्। ‘सबै क्षेत्रबीच समन्वय र सहकार्यको जरुरी छ’, उनले भने। परीक्षण भने संख्यात्मकभन्दा आवश्यकताले निर्धारण गर्ने डा. वन्तको धारणा छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा दिनेश गौतमले खबर लेखेका छन् ।
सोलेमानीको हत्याको बदला लिन इरानले खतरनाक योजना बुनेको दाबी...